Faay Cali 'halyeeyadda' iyada iyo seeygeedii la wada dilay - BBC News Somali
Image caption Haweenka ayaan inta badan darajo sare ka gaarin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya
Qarixii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho ka dhacay Aarbacii wuxuu galaaftay nolosha dhowr qof oo uu ka mid ahaa wasiir hore, balse waxaa hadal heynta shacabka si weyn u qabsatay haweeney ka mid ahayd dadkii naftooda ku waayay qaraxaas.
Gabadhan oo ahayd sarkaalad sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa weerarkaas waxaa kula dhintay seygeedii oo isaguna ka tirsanaa Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Gaashaanle Faadumo Cali Raage, oo aad loogu yaqaannay Faay Cali ayaa xasuus gaar ah ku reebtay quluubta dadka Soomaaliyeed, waxaana jira sheekooyin khaas ku ah iyada oo ku saabsan khasaarihii ay kala kulantay qaraxyadii ka dhacay dalka iyo weerarrada ay geysteen kooxda Al-Shabaab.
Wararka qaar ayaa sheegaya in seygeedii hore uu ku dhintay gacanta Al-Shabaab, halka haddana ay isla dhinteen ninkii ay wada joogeen.
Faay Cali ayaa lagu tilmaamay inay ka mid ahayd shakhsiyaadka ugu muhiimsan ee ka tirsan saraakiisha ku sugan furinta hore ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Image caption Faadumo Cali Raage
Haweenka ayaa tiro yar ka ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, intooda bandanna ma gaaraan darajada gaashaanlaha, balse Faay ayaa intii ay howsha qaranka heysay muteysatay bogaadin iyo dallacsiin kala duwan.
Faadumo Cali Raage waxay horay uga tirsaneyd ciidanka ilaadada madaxtooyada, muddooyinkii dambeyna waxa ay ka mid ahayd saraakiisha hoggaamiya howlgallada Ciidanka Xoogga ee ka socda caasimadda bannaankeeda, sida ay qortay Wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONNA.
Mar ayay soo noqotay taliyaha howl-gelinta ciidanka Danab.
Waxa ay ahayd sarkaalad karti badan oo qeyb libaax ka qaadatay dagaallo lagu wiiqay cadowga Alshabaab, iyadoo mar walba ku jirtay furinta hore ee dagaalka.
Sidoo kale Faay Cali Raage, waxa ay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo leh carruur iyo reer, kuwaas oo ay ku dadaali jirtay daryeelkooda.
Carruurta ay ka geeriyootay Faay Cali waxaa ugu yar cunug 1 bil jira oo naas nuujineysay.
Iyadoo 30 cisho oo kaliya umul ah ayay u kacday shaqadeeda ku saabsan difaaca dalkeeda.